kaspersky နဲ့autorun virus ကို ဘယ်လိုသတ်မလည်း — MYSTERY ZILLION
kaspersky နဲ့autorun virus ကို ဘယ်လိုသတ်မလည်း
ကျွန်တော် ဒီနေ ့kaspersky နဲ့autorun virus တွေကို ဘယ်လိုသတ်နိုင်မလည်း google မှာရှာကြည့်တယ် kaspersky ဖိုရမ်မှာ ရေးထားတာလေးတွေ ့လို အားလုံးဖတ်နိုင်အောင်လို ့
ပြန်လည်ကူးယူပေးလိုက်ပါတယ် တကယ်လို ့မကြိုက်ရင်လည်း ပက်ပက်စက်စက်သာပြောပါတော့
5. When the вЂњWelcome to SetupвЂќ prompt appears.Press вЂњRвЂќ to start the Recovery Console
6. If asked вЂњWhich Window installation would you like to logon toвЂќ select the number. Type вЂњ1? then Enter, if only one installation of Windows is present
- Type вЂњedit autorun.infвЂќ it will open DOS Editor and display contents as follows
10. Exit DOS Editor and return to command prompt, \_>
ဒီဟာက kaspersky ဖိုရမ်မှာတောင်နောက်ကျနေသေးတယ် ။ knowledge bridge Pစာအုပ်(ဘယ်လထုတ်လဲမမှတ်မိ) မှာက ရေးပြီးတာဖြင်.ကြာပြီ။ ဟိ ဟိ တော်လိုက်တဲ. မြန်မာအိုင်တီပညာရှင်တွေ ............. မြန်မာကွ:D:P:)):D:P
ဟုတ်လား kaspersky ဖိုရမ်ကတောင် နောက်ကျနေတာဆိုတော့ မည်သို ့ပြောရမည်တောင်မသိဖြစ်
သွားပြီ ဟားဟား အကိုကလည်းဗျာ ဒီလောက်တော် နေတာ မသိနားမလည်တဲ့ ကောင်လေး
ကျွန်တော့ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ ဟားဟား